Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee gowr dhow ka dhacay Muqdisho. - jornalizem
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee gowr dhow ka dhacay Muqdisho.
Qaraxa oo la tilmaamay in ay fuliyeen labo ruux oo ismiidaamiye ahaa watayna gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay doonayeen in ay gudaha u galaan xarunta Isbitaalka Shifa oo kamid ah Isbitaalada ku yaala Muqdisho ee ay maamusho dowlada Turkiga.
Waraka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in labada ruux ee watay gaariga is qarxiyay ay doonayeen in ay gudaha u galaan xarunta Isbitaalka, hayeeshee dharka dambe ee Isbitaalka ay gaari ku dhufteen, sidaasina ku qarxay.
Khasaaraha ka dhashay qaraxa ayaa kasoo baxeysa warar kala duwan warar lagu kalsoonyahay oo aynu ka heleyno goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ku waramaya in qaar kamid ah shaqaalaha Turkiga ee ka howlgalayay Isbitaalka uu dhaawac soo gaaray, ayadoona ilaa iyo imika la xaqiijinayo dhaawaca labo kamid ah shaqaalaha Turkiga ah, wallow khasaaraha uu intaasi ka badan karo.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowlada ayaa qaraxa kadib gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, ayadoona saxaafada loo diiday in ay gudaha u galaan xarunta Isbitaalka qaraxa lala beegsaday, waxaana la filayaa in saraakiisha amaanka ee dowlada ay goor dhow la hadlaan saxaafada si ay faahfaahin dheeraad ah uga bixiyaan khasaraha uu sababay qaraxa.